सिजीको फ्यान र कुलरहरुको माग बढ्यो | Ratopati
काठमाडौं । नेपालकै नं. १ र ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सि.जी.ले गर्मी मौसमलाई ध्यानमा राखि विभिन्न किसिमका आकर्षक एवं नयाँ मोडलका फ्यान र कुलरहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
विभिन्न साइज र स्वरुपमा धेरै भन्दा धेरै प्रकारमा फ्यानहरु ल्याएको छ । जसमा सिलिङ फ्यान, स्ट्याण्ड फ्यान, रिचार्जयबल फ्यान, अल पर्पोज फ्यान, एक्जस्ट फ्यान, टेबल र वाल फ्यान जस्ता रहेका छन् ।
सि.जी.ले अहिले सिलिङ फ्यानमा अकर्षक डिजाइन, धेरै टर्क मोटर र आर.पी.एम. रहेको, फ्यान चलाउँदा विभिन्न किसिमका कलरहरु फाल्ने जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै स्ट्याण्ड फ्यानमा पाँच वटा सम्म ब्लेडहरु रहेको छ, जसको कारण धेरै भन्दा धेरै हावा प्रवाह गर्दछ । रिमोट पनि रहेकोले यी फ्यानहरु सजिलै चलाउन सकिन्छ । बत्ती गएको समयमा पनि चिसो हावा लिनको लागि सि.जी.ले चार्ज गरेर चलाउन मिल्ने रिर्चाजेयबल फ्यानहरु समेत ल्याएको छ ।
होटल र अफिसमा सजिलै प्रयोग गर्न मिल्ने टेबल र वाल फयन ल्याएको छ । तपाईको किचेन भित्रको हावालाई बाहिर फाल्न एड्जस्ट फ्यान रहेको छ । यसरी सि.जी.ले विभिन्न प्रकारका फ्यानहरु उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै अर्को नेपालकै कुलरहरुमा वाइडिएस रेन्ज बन्न सफल सि.जी.का कुलरहरु १४ प्रकारमा ल्याएको छ । कुलरका प्रकारहरुमा डेजर्ट, विन्डोज, टावर र पर्सनल जस्ता रहेका छन् । यी कुलरहरुमा प्रायः सबैमा रिमोट पनि उपलब्ध गराएको छ । यसको मुख्य विशेषताहरु भनेको हनि कम प्याड, पावरपुल मोटर, आइस च्याम्बर, कार्बन फिल्टर, इनर्जी सेभिङ आदि जस्ता रहेका छन् ।